Best of Fish Pranks
DHAGEEYSO:- Maamulka gobalka Banaadir oo ka warbixiyay qasaarihii ka dhashay dab shalay ka kacay kaalin shidaal oo ku taala Muqdisho.
on September 04 2013 Maamulka gobalka Banaadir ee dowladda Soomaaliya ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyay dab maalintii shalay ka dhacay agagaarka sarta Seybiyaano ee magaalada Muqdisho, kaas oo geeystay qasaare aad u xoogan.
Maxamed Yuusuf Cusmaan oo ah afhayeenka maamulka gobalka Banaadir ayaa waxa uu faah faahin ka bixiyay qasaaraha ka dhashay dabkaas, waxaana uu sheegay inay ku dadaaleen daminta dabkaas qaatay muddo labo saacadood.
Wuxuu afhayeenka sheegay in dabkaasi uu basbeeliyay hanti u badnaa shidaal, iyadoona dad dhaawacyo kasoo gaareen dabka iyo rasaastii lagu kala ceyrinaayay dadweynaha.
Afhayeenka ayaa dhinaca kale aad uga mahad celiyey gawaarida dab damisyada AMISOM iyo Hormuud oo kala qeyb galay daminta dabkaas, inkastoo muddo lagu guuleeysan waayay in dabkaasi si fudud loo damiyo.
Wuxuu ugu dambeeyn baaq u diray ganacsatada iyo malkiilayaasha goobaha lagu iibiyo shidaalka, isagoona ugu baaqay inay sameeystaan dab damisyadda yar yarka ah ee looga hortago markii uu dabka yaryahay, si ay u yaraadaan faafida dabkaasi geeysta qasaaraha badan.
DHAGEEYSO AFHAYEENKA MAAMULKA GOBALKA BANAADIR
Xafiiiska Warbaahinta Bulshoweyn.com ee Magaalada Muqdisho.Nagala Soo Xiriir:- info@bulshoweyn.com